अस्ट्रेलियामा उत्पन्न समस्यामा कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोशी देख्नु गलत l – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
अस्ट्रेलियाको केस: घटना एक परिघटना अनेक !
फागुन १२ / अहिले अस्ट्रेलियाको एक निजी कलेजमा अध्ययनरत नेपालि विद्यार्थीहरुको समस्या नेपाल तथा अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया सरकार र नेपाल सरकारका शिक्ष र प्रसासनिक निकायको चासोको बिषय बनेको छ ।
ए.आइ.बी.टी.कलेज खारेजीको घटना सार्बजनिक भएसंगै विद्यार्थी ब्यबस्थापनको समस्या बाहिर आएको छ । संगसंगै एक नैतिक प्रश्न चिन्ह पनि अस्ट्रेलिया सरकार, उक्त कलेज, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय प्रमाणिकरण शाखा, शैक्षिक परामर्शसेवा दिने कन्सल्टेन्सीहरु र समग्र शैक्षिक पद्दती माथि उठेको छ ।
यसमा केहि मिडियाको निहित स्वार्थले गर्दा एक पक्ष (कन्सल्टेन्सी )लाई मात्र दोसी देखाउदै घटनालाई मिडीयाबाजी र भाइरल गरिदै छ । जसको फलस्वरूप घटनाको बास्तविकता र पिडितले न्याय पाउने कुरामा असहजता आउन सक्ने असावधानीको अवस्था सिर्जित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। समग्रलाई मुल्यान्ग्कन गर्दा घटना सरोकारवाला सबै पक्षको असावधानी र हेलचेक्र्याइँले गर्दा यो अवस्था आएको देखिन्छ ।
जसमा निम्न ६ पक्षहरुको अवस्था र कार्यशैलिलाई बुझ्न जरुरि छ ।
कन्सल्टेन्सीले कलेजलाई बढी बिस्वास गर्नु
नैतिकवान र ब्यवसायमुखी हुदै गर्दा नेपालका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुले आफुले रिकम्यान्ड गरेको कलेज तथा युनिभर्सिटीको वास्ताविकता बुझ्नु जरुरि रहन्छ। आफु पूर्णरुपले निर्धक्क भएर मात्र विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई परामर्श दिनु पर्ने हुन्छ। जहाँसम्म ए.आइ.बी.टी. कलेजको कुरा छ, कन्सल्टेन्सीहरुले कलेजले आफ्नो नर्सिङ्गको पाटोको ‘दर्ता प्रक्रिया निश्चित समयमा पुरा हुने आस्वासनप्रति मात्र पूर्ण भरोसा गर्नु गलत हुन गएको देखिन्छ। यसरि हेर्दा कन्सलटेन्सीहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र उक्त कलेज अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ तर त्यसो भएको देखिएन । त्यसैले यस्ता बिषयमा शैक्षिक परामर्शदाताहरू जिम्मेबार बन्न जरूरि देखिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले NOC दिदा विचार पुर्याउन नसक्नु
उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरुलाई “नो अब्जेक्सन सर्टिफीकेट” एन.ओ.सी. प्रदान गर्ने केन्द्र भनेको नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयको प्रमाणीकरण साखा मात्र हो। प्रमाणीकरण साखा यस्तो केन्द्र हो, जहाँबाट मात्र आधिकारिक रुपमा बैदेशिक अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरुको बैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नु सुनिचित भबिस्यका निम्ति उच्च शिक्षाका लागि ओभरसिज मुलुकहरुमा जाने विद्यार्थीहरुले पत्यक्ष सम्पर्क राख्ने एउटा सरकारी निकाय प्रमाणीकरण साखा हो । यहाँनिर, प्रमाणीकरण साखाले विद्यार्थी जाने र जान लागेको कलेज तथा युनिभर्शिटि, त्यसका बैधानिक प्राबधान, कोर्स-विषयको सामन्जस्यता सम्बन्धमा सामान्य अध्ययन-अनुसन्धान समेत नगरिरहेको त्रुटी देखिन्छ। समग्रमा बैदेशिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायको ठुलो भूमिका र दायीत्व स्पस्ट पर्रिनु पर्ने यो अवस्थामा बेसिक लेबलको सुचना संकलन प्रक्रियामा नै कजोरी देखिएको छ ।
ए.आइ.बी.टी.कलेज आफुले सम्बन्धन पाउने कुरामा बढिनै आशावादी हुनु
अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजिनेस एण्ड टेक्नोलोजी ए.आइ.बी.टी.को सन्दर्भमा कुरागर्दा: विद्यार्थीको पढाईको मान्यता र हालको खारेजी मुख्य दुइ बिषय हुन्। ए.आइ.बी.टी ले वैधानिकताको भन्दा शैक्षिकसत्र संचालनमा जोड दिएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा आफैमा उच्च आकांक्षा राखेर कलेजले सम्बन्धन प्राप्त भैहाल्छ भन्ने किसिमले कार्यशैलिलाई अगाडी बढाएको देखिन्छ । यसलाई बुझ्न सर्बप्रथम शैक्षिक पद्दतिलाई केलाउन जरुरि हुन्छ। त्यहाँ: अस्ट्रेलियामा नर्सिङमा स्नातक गरेको छ भने ए.एच.पी.आर.ए. मा दर्ता भएको हुनु पर्दछ । यसले ए.एन.एम.ए.सी. मान्यता प्राप्त कोर्सको आधारमा निर्धारण गर्छ। पुन एन.एम.आर.ये द्वारा निर्देशित ANMAC’s National Competency Standards पुरा गरेपछि मात्र अस्ट्रेलियामा काम गर्नका लागि योग्य ठहर्छ । ए.आइ.बी.टी. कलेज डिप्लोमा अफ नर्शिंग कोर्स ASQA र CRICOS मा दर्ता छ। जसले गर्दा विदेशी विद्यार्थीले पढ्न आउन त पाउने देखिन्छ। तर, यही कोर्सलाई ए.एन.एम.ए.सी.ले मान्यता नदिएको कारणले AHPRA मा भने दर्ता नै नहुने भयो, फलस्वरूप उक्त डिप्लोमाको आधारमा बैधानिक दाखिलायुक्त नर्स भएर अस्ट्रेलियामा कामगर्न नपाउने देखियो । कलेजको सन्धर्भमा मुलभूत समस्याको जड यहि देखिन्छ: यसको परिणाम स्वरूप विद्यार्थीले पढेको कोर्सको आधारमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले आर.पी.एल. तथा कुनै विषयमा छुट समेत नदिने अवस्था सिर्जित भयो ।
विद्यार्थीलाई जानकारी: केही युनिभार्शिटिहरूले ब्याचलरको लागि गरेको अफर फिर्ता गरेको कुराहरु समेत बजारमा आएको छ । कुनै पनि विद्यार्थीलाई ए.आइ.बी.टी.कलेजमा डिप्लोमा सकिसके पछि ब्याचलरमा भर्ना लिन्छु भनि पूर्ण स्वीकृतिमा अफर लेटर पठाएको छ भने उक्त युनिभार्शिटिलाई मुद्दा गर्न समेत सकिने प्रावधान् छ ।
अस्ट्रेलियन् हाई कमिसनले भिषा रिलिज गर्दा ध्यान नदिनु
अस्ट्रेलियन् हाईकमिसनले नेपालि विद्यार्थीहरुलाई स्टुडेन्ट भिषा रिलिज गर्ने क्रममा अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजिनेस एण्ड टेक्नोलोजी ए.आइ.बी.टी कलेजको दर्ता र बैधानिकतालाई अनिवार्य रुपमा निर्क्योल गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त प्रक्रियामा अस्ट्रेलियन् हाईकमिसनको निकै ठूलो हेल्चेक्र्याई देखिन्छ।
माथिल्लो प्रकोस्ठमै प्रस्तुत गरेको शिक्षाको शैलीलाई यहाँ पनि पुन-उद्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ट्रेलियामा मान्यता प्राप्त कलेज र विश्वविध्यालयले प्रदान गर्न डिप्लोमा-डिग्री प्राप्त गर्दैमा आफूले पढेको विषयबस्तुको आधारमा नै काम गर्न पाइन्छ भन्ने छैन। काम गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको पुन आधिकारिक स्विकृती प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा नर्सिङमा स्नातक गरेको छ भने ए.एच.पी.आर.ए. Australian मा दर्ता भएको हुनु पर्दछ । यसले ए.एन.एम.ए.सी. मान्यता प्राप्त कोर्सको आधारमा निर्धारण गर्छ। पुन एन.एम.आर.ए. द्वारा निर्देशित ANMAC’s National Competency Standards पुरा गरेपछि मात्र अस्ट्रेलियामा काम गर्नका लागि योग्य ठहर्छ ।
अब, अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजिनेस एण्ड टेक्नोलोजी ए.आइ.बी.टी.को सन्दर्भमा कुरागर्दा: डिप्लोमा अफ नर्शिंग कोर्स ASQA र CRICOS मा दर्ता छ। जसले गर्दा विदेशी विद्यार्थीले पढ्न आउन त पाउने देखिन्छ। तर, यही कोर्सलाई ए.एन.एम.ए.सी.ले मान्यता नदिएको कारणले AHPRA मा भने दर्ता नै नहुने भयो, फलस्वरूप उक्त डिप्लोमाको आधारमा बैधानिक दाखिलायुक्त नर्स भएर अस्ट्रेलियामा कामगर्न नपाउने देखियो । यसको परिणाम स्वरूप विद्यार्थीले पढेको कोर्सको आधारमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले आर.पी.एल. तथा कुनै विषयमा छुट समेत नदिने अवस्था सिर्जित भयो ।
मुलभूत रुपमा अस्ट्रेलिया सरकार प्रति उठाईएको र उठाइनु पर्ने प्रश्न यो छ कि: अस्ट्रेलियन सरकारले के-कति आधारमा ए.आइ.बी.टी. लाई सी.आर.आई.सी.ओ.एस् प्रदान गरेको हो ?
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले अन्धभक्त ढङ्गले कन्सलटेन्सीलाई बिस्वास गर्नु
एकाध बाहेक प्राय शैक्षिक परामर्शदाता कन्सलटेन्सीहरु जिम्मेबार, नैतिकवान र आचरण युक्त नै छन् । जसलाई तिनका छाता-संगठनले पनि रेखदेख गरिरहेकै हुन्छ। तर बजारमा केहि त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु पनि छन् जसले नाम ‘परामर्शदाता’ राखे पनि काम अपारदर्सिताको गर्दछन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गरेको परामर्शको पछि लाग्दा विद्यार्थीको करियर कता तिर जाला ? आज हरेक कलेज तथा बिश्वबिध्यालयहरुको जानकारी वेबसाईटमै राखिएको हुन्छ। विद्यार्थी र अभिभावकहरू पनि विदेश पुगीहाल्ने सहज बाटोको खोजीमा बिसयबस्तुको गहिराई नबुझिकन लाखौं पैशा तिरेर कागजातमा हस्ताक्षर गरेपछि आउने परिणामका बारेमा पूर्व सचेत हुन जरूरि देखिएको छ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई थप जानकारी: अस्ट्रेलियामा व्यवसायिक शिक्षा दिन कलेजलाई अनुमति दिन निकाय ए.एस.क्यु.ए.हो। जसले ll – lll – IV – डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमाका कोर्षको प्रमाणपत्र आर.टि.ओ.को रूपमा दर्ता गरेर सर्टिफिकेट दिन कानूनी मान्यता प्राप्त गर्छ ।
त्यसैगरी टि.ई.क्यु.एस.ए.ले स्नातक, स्नाकोत्तर, विद्यावारिधि जस्ता शैक्षिक डिग्री प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षालयलाई अनुमति दिएको हुनु पर्ने छ । यसरि माथिको मान्यता प्राप्त निकायले विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको ठहर्छ । तर, विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउन भने त्यहाको सरकारी निकाय (The Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students) मा दर्ता भई CRICOS नम्बर प्राप्त गर्नुपर्छ। उक्त नम्बर प्राप्ति पछि मात्र सी.ओ.ई. (Confirmation of Enrolment) जारी हुन्छ। अब, यसको आधारमा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, प्राप्त गरेको अंक, अंग्रेजी भाषाको दख्खल ‘आई.ई.एल्.टी.एस्.को अंक’ आर्थिक अवस्था तथा अस्थायी रूपमा मात्र अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न जनाएको कटिबद्धता ‘जी.टि.ई’, वास्तविक विद्यार्थी हो? या होइन? भन्ने लगायतको मूल्यांकन र गरेपछि मात्रै अध्यागमन विभागले विद्यार्थीलाई “प्रवेशाज्ञामा विभिन्न शर्तहरु सहित मात्र” विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्छ।
निहित स्वार्थ पूर्तिमा केहि मिडिया लागि पर्नु
जमाना भाईरलवाजको छ, यसको फाईदा उठाउदै मिडियाकर्मिको पगरी गुथेर सत्य-तथ्य खबरहरुलाई घुम्राहमा राख्दै सनसनीपूर्ण ढंगबाट निश्चित बर्गको ब्यवासायीक् चरित्रमाथि प्रहार भएको छ। च्याउसरी झोला भरि आज पत्राकारिताका पुरोहितहरुको बिगबिगी छ । जसको रोजीरोटीको संरक्षण गर्न घटनालाई अदलबदल गर्दै एकातर्फको पल्लाभारि बनाउने खेलमा यिनीहरु सक्रिया देखिन्छन। यसरि गलत सुचना पस्कन लागिपरेका केहि पत्रकारको सुचनालाई आधार बनाएर हो-हल्लाको डम्फुको तालामा नाच्नेको संख्या पनि कमि छैन । जसले अन्त्यमा गएर सरोकारवालाहरुको मुख्य एजेन्डालाई नै अनिर्णयको बन्दि बनाईदिने संत्राश देखिन्छ ।
यहाँ यो र त्यो मात्र दोषी हो ! भन्ने निर्क्योल किटानी जाहेरी दिने अवस्था नै छैन। हुन्छ-हुन्छ भनेको भरमा पहिले जस्तो चलेको छ त्यस्तैलाई चलाईरहेको अवस्थामा आजको यो दुर्घटना घट्न गएको हो । यसमा नैतिक रुपमा आफुले लिनुपर्ने जिम्मेवारि सबै सरोकारवालाहरुले समयमै लिएर संयमताका साथ समस्यालाई जडबाटै निर्मुल पार्नु अहिलेको आवस्यकता देखिन्छ ।यहा सरोकार वाला सबै पक्ष उत्तिकै रुपमा आ -आफ्नो ठाउबाट चुकेको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ सामुहिक प्रयासबाट मात्र यो समस्याको हल निकाल्नु जरुरि देखिएको छ।
ने.वि.संघको आन्तरिक किचलो: दुई गुटबीच झडप !
अस्ट्रेलियाको घटनाबाट पिडित मेरा विद्यार्थीहरुको नैतिक जिम्मेवारी लिएको छु मिडियाहरुले अनावश्यक लालछना नलगाइदिनहुन समेत अनुरोध गर्दछु - टन्डन